Forex Forecasting – Myanmar Forex Villa
ကျွန်တော်တို့ဟာ Forex forecasting လုပ်တဲ့အခါ မှာ ကြိုတင်ခန့်မှန်းတာကို အခြေခံအားဖြင့်နည်းလမ်း နှစ်မျိုး ဖြင့် အသုံးပြုကြပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ Technical analysis နဲ့ Fundamental analysis တွေပါပဲ။ ဒါဟာ forex market ရဲ့ လူပ်ရှားပုံကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် analysis လုပ်ကြရာမှာ အသုံးပြုကြတဲ့ Major methods နှစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Technical analysis နဲ့ fundamental analysis တို့ ဟာ အလွန်ပဲ သိသိသာသာ ကွာခြားပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော်တို့ forex trader အတွက် နှစ်ခုစလုံး ဟာ ဈေးကွက်ကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ဖို့ အတွက် အသုံးဝင်နေပြန်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီနည်းလမ်းနှစ်ခုစလုံး မှာ price သို့မဟုတ် price movement တွေကို ကြိုတင်ခန့်မှန်း ဟောကိန်း ထုတ်နိုင်တဲ့ တူညီတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ရှိကြပါတယ်။
ကြှနျတျောတို့ဟာ Forex forecasting လုပျတဲ့အခါ မှာ ကွိုတငျခနျ့မှနျးတာကို အခွခေံ အားဖွငျ့ နညျးလမျး နှဈမြိုး ဖွငျ့ အသုံးပွုကွပါတယျ။ အဲ့ဒါတှကေတော့ Technical analysis နဲ့ Fundamental analysis တှပေါပဲ။ ဒါဟာ forex market ရဲ့ လူပျရှားပုံကို ကွိုတငျခနျ့မှနျးရနျအတှကျ အဓိကအားဖွငျ့ analysis လုပျကွရာမှာ အသုံးပွုကွတဲ့ Major methods နှဈခုလညျး ဖွဈပါတယျ။ Technical analysis နဲ့ fundamental analysis တို့ ဟာ အလှနျပဲ သိသိသာသာ ကှာခွားပါတယျ။ သို့သျောလညျး ကြှနျတျောတို့ forex trader အတှကျ နှဈခုစလုံး ဟာ ဈေးကှကျကို ကွိုတငျခနျ့မှနျးနိုငျဖို့ အတှကျ အသုံးဝငျနပွေနျပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီ နညျးလမျး နှဈခုစလုံး မှာ price သို့မဟုတျ price movement တှကေို ကွိုတငျခနျ့မှနျး ဟောကိနျး ထုတျနိုငျတဲ့ တူညီတဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှေ ရှိကွပါတယျ။
6 thoughts on “Forex Forecasting”
Did you go to university? https://econoautos.cl/grisactin-baikal-pharmacycom-vyjg buy grisactin baikal-pharmacy.com They were initially stranded on an island in the Silver River, but learned to swim and made their way to the mainland. So not only do these monkeys have herpes, but they are adapting to discover new ways to spread it.
I’d like to pay this cheque in, please http://www.highwaytohimalayas.in/lady-era-100mg-in-sri-lanka-xroe lady era 100mg in egypt âThe problem with clicking virtual buttons in the air is thatâs not really something that humans do,â Harrison said. âWe work from tables, we work on walls â¦ thatâs something we do onadaily basis â¦ we donât really claw at the air all that often.â To really understand what he means, just remember when Bluetooth first came out. Not only did everyone look crazy talking to themselves on street corners, it was hard not to feel self-conscious startingaconversation into empty air without the physical phone asaprop.
I seriously love your site.. Great colors & theme. Did you build this amazing site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own personal blog and would love to learn where you got this from or just what the theme is called. Many thanks!|
Previous Previous post: စိတ်​မ​ကောင်းပါဘူး SME တို့ –
Next Next post: နိုင်ငံတကာရွှေဈေးကွက်တွင် ရောင်း/၀ယ်ခြင်း နည်းစနစ်” သင်တန်း ရန်ကုန်တွင် ဖွင့်လှစ်မည်